आफूलाई विश्वासको मत माग्दा के भने प्रधानमन्त्रीले ? | राजनीति | साझामन्च
आफूलाई विश्वासको मत माग्दा के भने प्रधानमन्त्रीले ?
साझामञ्च, प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , २७ 17:19:59
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्रतिपक्षीका रुपमा नभएर सरकारको सहयोगीको रुपमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सम्वद्ध सबैलाई आव्हान गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उनले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने बाचा गर्दै उनले त्यसका लागि सबैलाई मत दिन आग्रह गरे ।
‘हामी समृद्धिको बाटोमा अघि जानुपर्छ । हामी अब समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ । यो यात्राको अगुवाई सत्तापक्ष, सरकारले र प्रधानमन्त्री भएकाले मैले गर्न सक्छु । तर यो महाअभियान हो । यो हामी सबैको साझा यात्रा हो’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई दम्भ देखाउने समय र अलमलिने सुविधा नभएको जिकिर पनि गरे ।
‘हामी शान्ति चाहन्छौं । आज हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं । पक्ष र प्रतिपक्ष भएर, सरकार हुँ भनेर दम्भ देखाउने समय छैन, अब अलमलिने सुविधा छैन । हामी सबै एकतावद्ध भएर, सहमतिकासाथ अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षी पनि सहयोगी हुनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत माग्ने क्रममा सांसदहरु
सामुन्ने भने ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, विभिन्न अवस्था, विश्वास, विविधतायुक्त भुगौलमा बस्ने जनताबीच समानतामूलक समाज स्थापना गर्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए ।
‘एक अर्काका भावनालाई सम्मान गर्दै सद्भावका साथ अघि बढ्नुपर्छ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु’ प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान थियो ।
उनले जनताको चाहना र मागअनुसार सरकार चल्ने भएकाले सबै सांसदलाई खुलारुपमा सरकारसँग जनताका पक्षमा काम गर्न तयार रहनसमेत आग्रह गरे ।